Mourinho Oo Cashar Lama Ilaawaan Ah Loo Dhigay Xilli Tottenham Ay Hogaan 3-0 Ah Iska Qasaarisay Sideed Daqiiqo Oo Ciyaarta Ka Dhiman – Laacibnet.net
Mourinho Oo Cashar Lama Ilaawaan Ah Loo Dhigay Xilli Tottenham Ay Hogaan 3-0 Ah Iska Qasaarisay Sideed Daqiiqo Oo Ciyaarta Ka Dhiman
Tottenham ayaa si cajiib ah waxay iska qasaarisay hogaan seddex gool oo nadiif ah iyadoo West Ham ay sameysay soo laabasho cajiib ah ciyaarta oo ka harsan sideed daqiiqo iyagoo ku qabtay kooxda Mourinho barbaro 3-3 ah kulankii ka dhacay garoonka Tottenham Stadium.
Hueng-Min Son ayaa goolasha u furay Tottenham 45 ilbiriqsi markii ay socotay ciyaarta iyadoo Harry Kane uu labo gool dhaliyay iyadoo Tottenham ay 3-0 hogaanka ku heysay ilaa iyo daqiiqadii 82aad.
Gareth Bale ayaa sidoo kale kursiga keydka ka soo kacay isagoo saftay kulankiisii ugu horeysay ee tan iyo markii uu kooxda ku soo laabtay laakiin West Ham ayaa si waali ah ciyaarta ku dhameysay.
West Ham ayaa looga naxsaday gool markii ay ciyaarta bilaabatay iyadoo daqiiqadii ugu horeysayba uu shabaqa soo taabtay Son ka dib kubad uu ka helay Harry Kane.
Son ayaa isna markiisa caawiye u noqday Harry Kane kaasoo kubada ka dhex bixiyay lugaha Declan Rice ka hor inta uusan shabaqa soo taabanin.
Sideed daqiiqo ka dib, Spurs waxay West Ham ku hogaamineysay 3-0 markii Sergio Reguilon karoos ka soo dhigay garabka bidix, waxaana madax ku dhaliyay Harry Kane.
West Ham wax badan ma aysan sameynin inta badan ciyaarta iyagoo aan dhibaato u abuurin goolhaye Hugo Lloris madaama ay ciyaarta iska heysatay Tottenham laakiin West Ham waxay hurdada ka kacday 10kii daqiiqo ee ciyaarta ugu danbeysay.
Labo gool oo soo daahay ayay dhaliyeen daqiiqahii 82aad iyo 85aad iyadoo ay u kala saxiixeen Fabian Balbuena iyo gool uu iska dhaliyay daafaca Spurs Sanchez laakiin Manuel Lanzini ayaa gool qurux badan dhaliyay waqtigii dhimashada ciyaarta taasoo keentay inay ciyaarta ku dhamaato barbaro 3-3 ah.